विवाहित महिलाको सं’ख्या ब’ढेपछि प्रत्येक पु’रुषले दुई वटा विवाह नगरेमा क’डा स’जाय”,हेर्नुस कुन देश हो? – Namaste Dainik
September 9, 2020 September 9, 2020 NamastedainikLeaveaComment on विवाहित महिलाको सं’ख्या ब’ढेपछि प्रत्येक पु’रुषले दुई वटा विवाह नगरेमा क’डा स’जाय”,हेर्नुस कुन देश हो?
एजेन्सी – हाम्रो देशमा दुई विवाह गर्नेलाई कानुन लाग्ने गर्छ । एक भन्दा बढी श्रीमती विवाह गर्ने पुरुषलाई कानु नीरुपमा सजाय दिने गरिन्छ । तर यस्तो अनौठो ठाउँ पनि छ, जहाँ दुई विवाह नगरेमा सजाय दिइन्छ । तपाई लाई पत्यार नलाग्ला, तर अफ्रिकी देश इरिट्रियामा पुरुषले २ वटा श्रीमती बनाउनै पर्छ । यदि बहुबिबाह नगरे सजाय भोग्नु भोग्नुपर्छ । यहाँ पुरुषको संख्या थोरै भएकाले यस्तो कानुन बनाइएको बताइएको छ ।
रिया चक्रवर्ती पक्राउ प्रकरण : चर्चित नायिका सोनम कपुर र विद्या बालन रियाको सर्मथनमा उत्रिए
सैनिक हेलिकप्टर समुद्रमा खस्दा दुईको मृत्यु।
कोरोना विरुद्ध ५ महिने बालकको लडाइँ : भेन्टिलेटरमा ३२ दिन जम्माजम्मी ५४ दिनमा कोरोनालाई हार खोएर छोडे।